1 Samueri 16:1-23
16 Jehovha akazoti kuna Samueri: “Uchachema Sauro kusvikira rini,+ ini ndamuramba kuti arege kuva mambo waIsraeri?+ Zadza nyanga yako nemafuta+ uende. Ndichakutuma kuna Jese+ muBhetrehema, nokuti ndagadza mambo pakati pevanakomana vake.”+ 2 Asi Samueri akati: “Ndingaenda sei? Sauro akangonzwa nezvazvo chokwadi achandiuraya.”+ Jehovha akati: “Enda netsiru reboka, uti, ‘Ndauyira kuzobayira kuna Jehovha.’+ 3 Ushevedze Jese kuchibayiro chacho; uye ini ndichakuzivisa zvauchaita,+ undizodzere+ wandichakusarudzira.” 4 Zvino Samueri akaita zvakataurwa naJehovha. Paakasvika kuBhetrehema+ varume vakuru veguta vakatanga kudedera+ pavakasangana naye, naizvozvo vakati: “Kuuya kwenyu kunoreva rugare here?”+ 5 Iye akati: “Kunoreva rugare. Ndauya kuzobayira kuna Jehovha. Zvitsvenesei,+ tiende tose kuchibayiro chacho.” Akabva atsvenesa Jese nevanakomana vake, achibva azovashevedza kuchibayiro chacho. 6 Zvavaipinda, akaona Eriyabhi+ akabva angoti: “Chokwadi muzodziwa waJehovha ari pamberi pake.” 7 Asi Jehovha akati kuna Samueri: “Usatarira chitarisiko chake nourefu hwake,+ nokuti ndamuramba. Nokuti maonero anoita munhu haasiwo maonero anoita Mwari,+ nokuti munhuwo zvake anoona zvinooneka nemaziso;+ asi Jehovha, anoona zvakaita mwoyo.”+ 8 Jese akabva ashevedza Abhinadhabhi+ akaita kuti apfuure nepamberi paSamueri, asi iye akati: “Jehovha haanawo kusarudza uyu.” 9 Jese akazoita kuti Shamaa+ apfuure, asi iye akati: “Jehovha haanawo kusarudza uyu.” 10 Naizvozvo Jese akaita kuti vanakomana vake vanomwe vapfuure nepamberi paSamueri; asi Samueri akangoramba achiti kuna Jese: “Jehovha haana kusarudza ava.” 11 Samueri akazoti kuna Jese: “Ava ndivo vakomana vacho vose here?” Iye akati: “Kusvikira zvino gotwe rasiyiwa,+ tarirai! riri kufudza makwai.”+ Samueri akati kuna Jese: “Tumira shoko unomutora, nokuti hatisi kuzogara pasi kuti tidye kusvikira auya pano.” 12 Naizvozvo akatumira shoko akaita kuti auye. Zvino akanga ari mutsvuku,+ jaya rine maziso akanaka nechitarisiko chakanaka. Jehovha akabva ati: “Simuka umuzodze, nokuti uyu ndiye!”+ 13 Naizvozvo Samueri akatora nyanga yemafuta,+ akamuzodza ari pakati pevakoma vake. Mudzimu waJehovha wakatanga kushanda pana Dhavhidhi kubvira pazuva iroro zvichienda mberi.+ Gare gare Samueri akasimuka, akaenda kuRama.+ 14 Zvino mudzimu waJehovha wakabva+ kuna Sauro, mudzimu wakaipa+ waibva kuna Jehovha ukamuvhundutsa. 15 Vashandi vaSauro vakatanga kuti kwaari: “Tarirai, zvino, mudzimu wakaipa unobva kuna Mwari uri kukuvhundutsai. 16 Tapota, ishe wedu ngaarayire vashandi venyu vari pamberi penyu kuti vatsvake munhu ane unyanzvi+ hwokuridza rudimbwa.+ Mudzimu wakaipa unobva kuna Mwari paunouya pamuri, iye acharidza noruoko rwake, uye muchaita zvakanaka.” 17 Naizvozvo Sauro akati kuvashandi vake: “Ndapota, ndipei munhu anoridza zvakanaka, muuye naye kwandiri.”+ 18 Zvino mumwe wevashandi akapindura akati: “Tarirai! Ndakaona unyanzvi hwokuridza hune mumwe mwanakomana waJese muBhetrehema,+ iye murume akashinga, ane simba,+ murume wehondo,+ anotaura nounyanzvi,+ murume akanyatsoumbwa,+ uye Jehovha anaye.”+ 19 Sauro akabva atuma nhume kuna Jese akati: “Nditumire Dhavhidhi mwanakomana wako, ari kumakwai.”+ 20 Naizvozvo Jese akatora mbongoro, chingwa nehombodo yewaini+ nembudzana, akazvitumira kuna Sauro noruoko rwomwanakomana wake Dhavhidhi.+ 21 Zvino Dhavhidhi akasvika kuna Sauro akamushandira;+ iye akamuda kwazvo, akava mutakuri wezvombo zvake.+ 22 Naizvozvo Sauro akatumira shoko kuna Jese, achiti: “Ndapota, Dhavhidhi ngaarambe achindishandira, nokuti ndamufarira.” 23 Mudzimu waibva kuna Mwari pawaiuya pana Sauro, Dhavhidhi aitora rudimbwa oridza noruoko rwake; uye Sauro aizorodzwa uye aiita zvakanaka, uye mudzimu wakaipa waibva paari.+